Chọtara 16 ~ MATIU, MAK, LUK, JỌN, ỌLU OZI, ROM, 1 KỌRINT, 2 KỌRINT, GALETIA, EFESỌS, FILIPAI, KỌLỌSI, 1 TESALỌNAIKA, 2 TESALỌNAIKA, 1 TIMỌTI, 2 TIMỌTI, TAITỌS, FAILIMON, HIBRU, JEMES, 1 PITA, 2 PITA, 1 JỌN, 2 JỌN, 3 JỌN, JUD, NKPUGHE
“Ahụhụ dịrị unu ndị Farisii, nꞌihi na unu na-enye Chineke otu ụzọ nꞌime ụzọ iri nke ego nile unu nwere, ya na otu ụzọ nꞌime ụzọ iri nke akwụkwọ nri ntakịrị dị nꞌubi unu, ma unu ekpọghị ikpe ziri ezi na ịhụ Chineke nꞌanya ihe dị mkpa. Unu kwesịrị inye onyinye unu, ma unu ekwesịghị ịhapụ ime ihe unu kwesịrị ime.
Kpeenụ ikpe ziri ezi ụnu ekpela ikpe site nanị nꞌihe anya naahụ.”
ỌLU OZI 8:33
“Nꞌọnọdụ ịdị ala ya, e meghị ka ikpe ziri ezi ruo ya aka. Ònye pụrụ ịkọ akụkọ ajọ omume nke ndị bi nꞌọgbọ ya? Nꞌihi na e sitere nꞌụwa wepụ ndụ ya.”
ỌLU OZI 28:4
Mgbe ndị obodo a hụrụ agwụ ahụ ka ọ tụhịkọtara onwe ya nꞌaka Pọl ha gwarịtara onwe ha sị, “Onye a bụ ogbu mmadụ, anaghị eji ọkụ enyo ya! Ọ bụ ezie na ọ gbanarịrị mmiri, ma ikpe ziri ezi aghaghị ikpe onwe ya.”
O kwutọghị onye ọ bụla mgbe ha na-ekwutọ ya. Ọ baghị mba ọ bụla mgbe ha na-ata ya ahụhụ, kama nanị ihe o mere bụ iwere ihe nile nyefee nꞌaka Chineke onye na-ekpe ikpe ziri ezi.